राेचक – Page2– MediaNP
अनुहारको रौँ हटाउन ब्युटी पार्लर पुगेकी युवतीमाथि पर्यो यति ठूलो आपत, अनुहारकै कारण जागिरबाट समेत निकाला
काठमाडौँ । स्क्रिन ट्रिटमेन्टको लागि ब्युटि पार्लर पुगेकी अस्ट्रेलियाकी एक युवतीको जीवनमा निकै ठूलो ब्रजपात आइपार्यो । लेजर ट्रिटमेन्टको प्रयोग गरेर अनुहार सफा गर्न पार्लर पुगेकी ती महिलाको अनुहारमा देखिएको खराबीको कारण यतिसम्मकी उनले आफ्नो
केटीहरुलाई आफ्नो बनाउने चक्करमा भुलेर पनि नगर्नुहोस् यी गल्ती, अपनाउनुहोस् यी उपाय
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००९:०५0
काठमाडौँ । जब माया प्रेमको कुरा चल्छ तब युवायुवतीले फिल्मको कुरालाई आफ्नो प्रेम सम्बन्धमा दर्शाउने गर्छन् । फिल्ममा देखाइएका दृष्यलाई लिएर प्रेम सम्बन्धलाई फलो गर्ने गर्छन् । फिल्मलाई नै युवा युवतीले प्रेमलाई प्रभावित पार्ने चक्करको
काठमाडौँ । अभिभावक बनेसँगै धेरै जिम्मेवारी थपिएको हुन्छ । यो सँगै बालबच्चाको लालनपाल सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । बच्चाको पहिलो पाठशाला घर हो । बच्चा हुर्कने वातावरण जस्तो छ बच्चाले पनि त्यस्तै सिक्ने गर्छन् ।
यी हुन् करोडौं मूल्य पर्ने गाडीमा हुइँकिने मन्त्री (भिडियो)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०१३:५५0
मुलुकमा अहिले दुई तिहाँइको सरकार छ । सरकारको प्रमुख नारा छ, समृद्धी र सुशासन । तर, सरकारको कार्यशैली हेर्दा न समृद्धी आउने झल्को देखिन्छ, न त सुशासनको प्रत्याभूती नै । बलियो सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा धेरै
चाहिनेभन्दा बढी दिमाग लगाएपछि यस्तो पनि निस्कन्छ मानिसको दिमागबाट ! तपाई पनि हेरेर मज्जाले हास्नुहोस् !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ०११:४३0
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै हरेक कुराहरुलाई सजिलै हेर्न सुन्न र देख्न सकिने भएको छ । फरक व्यक्तिको फरक दिमाग फरक विचार भनेजस्तै केही अजिवको दिमाग भएका व्यक्तिको दिमागमा निस्केका केही अजिव तस्वीरहरु बेला
काठमाडौँ । मान्छेले आटेपछि असम्भव भन्ने कुरा केही छैन् , चन्द्रमा पनि छुन सकिदो रहेछ । किनभने मानिसहरुको सफलता भन्ने चिज एकैचोटी ठुलो भएर नगएपनि समय र मिहेनतसँगै सफलताको शिखर चुम्ने पक्का रहेछ । यसको
काठमाडौँ । अमेरिकाका एक व्यक्ति ठट्टा गर्दा समस्यामा परेका छन् । मजाक गरेर आफ्नो सात महिने छोरालाई टर्लीबाट निकाल्दै धितो राख्न भनेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जुन एउटा यस्तो पसल छ जहाँ धितो
विश्वकै अनौठो शहर ! जहाँ कसैसँग ठट्टा गर्न पाइदैन् !
काठमाडौँ । कतिपय मानिसको बानी हुन्छ जो कोहीसँग बोल्दा पनि ठट्टा गर्ने जिस्कने गर्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु कसैसँग जिस्किएको मन पराउँछन् । जिस्किएर नै रमाउने उनीहरुको बानी हुन्छ । तर विश्वका केही यस्ता शहरहरु रहेका
रेस्लिङ खेल्दाखेल्दै रिङभित्रै रेसलर सिल्भर किंगको मृत्यु
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: , ०, ००४:१७0
एजेन्सी, २९ वैशाख । रेसलर सिल्भर किंगको रेस्लिङ खेल्दाखेल्दै मृत्यु भएको छ । डब्ल्यूसीडब्ल्यूका पूर्व रेसलर एवं ज्याक फ्ल्याक नामक फिल्ममा अभिनय गरेका किंगको लन्डनमा आयोजित दर्शकले खचाखच भरिएको एक कार्यक्रममा मृत्यु भएको हो ।
काठमाडौँ । भारतको छत्तिसगढका एक युवाले आफुले श्रीमतीलाई कति माया गर्छु भन्ने कुरा प्रमाणीत गरेर देखाउन हातको औला काटेर बट्टामा बोकेर ससुराली पुगेका छन् । श्रीमान श्रीमनती बीच सामान्य झगडा भइरहन्छ तर माया कति गर्छ